ဒစ်ဂျစ်တယ် Format ကိုမှဆလိုက်ပြောင်းမှုအတွက်4Options ကို
scanner, ကင်မရာသို့မဟုတ် Professional ကကူးပြောင်းခြင်း?
ဆလိုက် Carousel ၏ထပ်ဟောင်းမိသားစုဓါတ်ပုံအတူတက် loaded တယ်? ကံမကောင်းစွာပဲအဲဒီဆလိုက်ပေါ်မှဓာတ်ပုံများကိုဖြစ်ကောင်းသင်ဤကိုဖတ်ပြီးအဖြစ်နွမ်းနေကြသည်။ အခုတော့ဒီဂျစ်တယ် format နဲ့မှသူတို့ကိုပြောင်းလဲနေဖြင့်အနာဂတ်သားစဉ်မြေးဆက်အဘို့သူတို့အားအမှတ်တရများကိုကယ်တင်ဖို့အချိန်ဖြစ်ပါသည်။
35mm ဆလိုက် digitizing ငါးကိုအဓိကရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်။
အတော်များများကရိုးရာ flatbed စကင်နာအဖြစ်ကောင်းစွာဆလိုက်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့မှာအလုပ်ကောင်းလုပ်ပါ။ ရိုးရာစက္ကူဓာတ်ပုံများနှင့်မှတ်တမ်းမှတ်ရာများအပြင်ဆိုးကျိုးနှင့်ဆလိုက် scan ဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်မယ့်ကင်နာရှာဖွေပါ။
အဆိုပါ optical (ဒီဂျစ်တယ်မဟုတ်) resolution ကိုအနည်းဆုံးအား 2400 dpi သို့မဟုတ် သာ. ကြီးမြတ်ဖြစ်သင့်သည်။ အတော်များများက flatbed စကင်နာများကကင်နာနှင့်တကွကြွလာခြင်းနှင့်တစ်ခါတစ်ရံတွင်သင်သည်သီးခြားစီဝယ်ရန်ရှိသည်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့ဆလိုက်-တခါတရံတခုအပိုင့်လင်းမြင်သာ adapter ကို attachment လိုအပ်သည်။ Hamrick ရဲ့ VueScan အကောင်းဆုံးအစားထိုးကမ်းလှမ်းခြင်းနှင့်အများဆုံး flatbed စကင်နာများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်တယ်ပေမယ့်ကောင်းသောကို bundle စကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့ဆော့ဖ်ဝဲ, သငျသညျနောကျဆုံးရလဒျမြားကိုကျော်ကိုထိန်းချုပ်ပေးဖို့လည်းတစ်ဦးမဖြစ်မနေဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျဝယ်ခင်ကောင်းစွာဆလိုက်ကိုင်တွယ်နေတဲ့ flatbed ကင်နာကိုရှာဖွေအသုံးပြုသူနှင့်အယ်ဒီတာအဖွဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုဖတ်ပါ။
dedicated ရုပ်ရှင်ပွဲတော် Scanner
တစ်ဦးပုံရိပ်အရည်အသွေးရှုထောငျ့မှ, သင့်ဆလိုက် digitizing များအတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမြင့်မားသော resolution ကိုအပျနှံရုပ်ရှင် / ဆလိုက်ကင်နာကိုသုံးပါရန်ဖြစ်ပါသည်။ သငျသညျစာသား scan မှဆလိုက်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ရှိမဟုတ်လျှင်သူတို့ကဒါဖြစ်ကောင်း, အကောင်းဆုံး option ကိုမျှမျှတတစျေးကြီးမပေးစေနိုင်ပါတယ်။ dedicated ရုပ်ရှင်စကင်နာ, သို့သော်, အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ resolution ကိုပူဇော်ကြဘူး, သူတို့ကနောက်ဆုံးပုံရိပ်တွေကျော်ပူဇော်ထိန်းချုပ်မှုသင်တစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ရွေးချယ်တဲ့အခါသင်ယေဘုယျအားဖြင့်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးတစ်ခုခုပါပဲ။
သငျသညျအကောင်းတစ်ဦးဒီဂျစ်တယ် SLR (တစ်ခုတည်းမှန်ဘီလူးတုံ့ပြန်မှု) ကင်မရာ, တစ်ဆလိုက်မိတ္တူပွား, ဒါမှမဟုတ် duper ပိုင်ဆိုင်ခဲ့လျှင်, သင့်ဆလိုက် digitizing အဘို့အကောင်းတစ်ဦး, စျေးသိပ်မကြီးတဲ့ option ကိုဟောကြားခဲ့ပါတယ်။ တစ်ဦးကဆလိုက်မိတ္တူပွားတစ်ဦးသည် T-တောင်ပေါ်မှာ adapter လက်စွပ်ကို အသုံးပြု. သင်၏အ DSLR ကင်မရာရဲ့မှန်ဘီလူး၏အရပျ၌ပူးတွဲ။ အဆိုပါ duper ၏အခြားအဆုံးနှစျခုဆလိုက်ရရှိထားသူတစ်လျှောတံခါးဝဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ duper သင်တို့ကိုလည်းထို့နောက်ဆလိုက်၏ရုပ်ပုံယူနိုင်အောင်သင့်ရဲ့ DSLR ရဲ့ပုံရိပ်လေယာဉ်ပေါ်သို့ဆလိုက်ရဲ့ image ကိုအလေးပေးတဲ့ပုံသေ aperture နှင့်အာရုံစူးစိုက်အကွာအဝေးနှင့်အတူတစ်ဦးပြည်တွင်းရေးမှန်ဘီလူးရှိပါတယ်။
ဆလိုက်မိတ္တူပွား (သင်တိုက်ရိုက်သင့်ရဲ့ကင်မရာရဲ့ Flash ကိုကဒ်ပေါ်သို့ဓါတ်ပုံတွေကိုယူနိုင်ပါသည်ကတည်းကသူတို့အဘယ်သူမျှမလျှပ်စစ်ဓါတ်အားတစ်ခုသို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာလိုအပ်) စျေးသိပ်မကြီးတဲ့အသုံးပြုရတာလွယ်ကူများမှာနေစဉ်, dupers သင်တစ်ဦး flatbed သို့မဟုတ်ရုပ်ရှင်ကင်နာများရနိုင်ဒစ်ဂျစ်တယ်အရည်အသွေးကိုပူဇော်ကြပါဘူး။ အများဆုံးကိစ္စများတွင်, အချို့ကိုသင်ပုံရိပ်ကိုဖြတ်တောက်မှုအပိုင်းလွှဲမရှောင်သာကြောင်းကိုရှာဖွေပါလိမ့်မယ်။ အများစုမှာဒီဂျစ်တယ်ကင်မရာများလည်းဓာတ်ပုံရဲ့အရိပ်အသေးစိတ်ထိခိုကျနိုငျတဲ့စကင်နာ၏ dynamic range ကို (ဓာတ်ပုံများတွင်အလင်းနှင့်မှောင်မိုက်အကြား gradation ၏ပမာဏ) ကိုပူဇော်ကြပါဘူး။ စကင်နာယေဘုယျအားဖြင့်အဖြစ်ကောင်းစွာ (က 3200 optical dpi ကင်နာအကြောင်း 12-megapixel ကင်မရာဒစ်ဂျစ်တယ်ကင်မရာနှင့်ညီမျှသည်) ပိုကောင်းတဲ့ resolution ကိုပူဇော်ဒါကြောင့်သင်သည်သင်၏ဆလိုက်ရာမှပိုကြီးတဲ့ဓါတ်ပုံတွေကို print ထုတ်ချင်လျှင်, ဒီသဘောတူညီချက်အနိုင်အထက်ဖြစ်နိုင်သည်။
သင်သည်လည်းအများအပြားဆလိုက်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဆိုရငျ, ဒါမှမဟုတ်သင်ကွန်ပျူတာများနှင့် software နှင့်အတူအလွန်အဆင်ပြေမဟုတ်ပါဘူးလျှင်, သင့်ရဲ့အကောင်းဆုံးအလောင်းအစားသငျသညျအဘို့သင့်ဆလိုက် scan တစ်ခုပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ရွေးချယ်ဖို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါတယ်။ အတော်များများကထိုကဲ့သို့သောဝန်ဆောင်မှုများကိုအင်တာနက်ပေါ်ရှိတွေ့နိုင်ပါသည်, သို့သော်သင်ဒေသခံဓာတ်ပုံကိုလက်တွေ့စမ်းသပ်ခန်းနှင့်အတူစစ်ဆေးနေခြင်းဖြင့်စိတ်ကိုပိုပြီးငြိမ်းချမ်းရေးကိုရှာဖွေပေမည်။
စျေးနှုန်းနှင့်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုကျယ်ပြန့်ကွဲပြားခြားနားသောကွောငျ့ကျိန်းသေန်းကျင်စျေးဝယ်။ အဆိုပါ photoshop တစ်ဦးချင်းတစ်ဦးချင်းစီဆလိုက်သန့်ရှင်းရေးနှင့်စိစစ်သည်ရှိမရှိမမေးရန်သေချာစေပါပါစေနဲ့။ သူတို့အသုတ်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးလျှင်, သင်ဖြစ်ကောင်းအရည်အသွေးနှင့်အတူပျော်ရွှင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
ရတဲ့ဖို့လှည့်ကွက် ကောင်းသောဒစ်ဂျစ်တယ် Scan ဖတ် သင့်ရဲ့ဆလိုက်၏သန့်ရှင်းသောဆလိုက်နှင့်အတူစတင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ compressed လေထု၏တစ်ဦးအမြန် hit နှင့်အတူချွတ်တစ်ခုချင်းစီဆလိုက်၏နှစ်ဖက်စလုံးကဖုန်မှုန့်နှင့် emulsion မထိဖို့မသတိပြုရကြမည်။ သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်ပုံများအားလုံးသိမ်းထားဖို့ memory နဲ့ hard drive ကိုနေရာတစ်ဦးအစာရှောင်ခြင်း processor နှင့်ပဒေသာနှင့်အတူမျှမျှတတအသစ်ဖြစ်၏သေချာအောင်လုပ်ပါ။ ဆလိုက်သို့မဟုတ်ဓာတ်ပုံများကိုစကင်ဖတ်ဖို့သည့်အခါတစ်ဦးက plug-in ကိုပြင်ပ hard drive ကိုအကောင်းတစ်ဦး option တစ်ခုဖြစ်သည်။ ရုပ်တုဆင်းတုများမှာတစ်ချိန်ကငါအလွန်အမင်းနောက်ပိုင်းတွင်ဘို့စသည်တို့ကသင်သည်ထိုကဲ့သို့သောသငျသညျ, ဖိုင်တွေကိုနာမည်ယခင်ကသီးနှံစိုက်ပျိုး, အလှည့်ကိုကယျတငျနိုငျအဖြစ်အကြီးအကျယ်အချိန်ကိုကုန်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့အပေါ်ခုတ်လှဲနိုင်သည့် Photoshop Elements အဖြစ်ကောင်းတစ်ဦးဓာတ်ပုံကိုအဖှဲ့အစညျး / တည်းဖြတ်အစီအစဉ်ကိုသို့တိုက်ရိုက် scan ကြောင်းအကြံပြုမယ်လို့ သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာပေါ်မှာရှိသမျှသောစည်းရုံးရေးမှူး၌တည်၏။
စကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့ပြီးနောက်, ဒီဗီဒီပေါ်သို့အသစ်ရဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖိုင်တွေကို back up - နှင့်အပိုကော်ပီသင့်မိသားစုအဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူမျှဝေဖို့ပါစေ!
မာကု Rothko ၏ဘဝနှင့်အနုပညာ
Edgar Degas: သူ၏ဘဝနှင့်လုပ်ငန်း
အဆိုတော် Jean-Michel Basquiat ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ
ဆာဗေးဒေါ Dali, Surrealist အဆိုတော်များ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ
မော်ဒန်အနုပညာ6အတိုငျး Styles
Paint လုပ်နည်းသင်ယူခြင်းမှတစ်ဦးက Beginner ရဲ့လမ်းညွှန်
သင့်မိသားစု, Movies Digitizing
ရှင်ပေါလု Klee ၏ဘဝနှင့်အနုပညာ
ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း Hartigan: သူမရဲ့ဘဝနှင့်လုပ်ငန်း
ခရစ္စမတ်၏ The Magic
ATP အဓိပ္ပာယ် - အဘယ်ကြောင့် ATP ဇီဝြဖစ်အတွက်အရေးကြီးမော်လီကျူး Is
အရောင်းခွန် - အရောင်းအခွန်၏စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်
ယင်းအဖြစ်များသည့်လျှောက်လွှာပေါ်တွင်ကိုယ်ပိုင်စာစီစာကုံး Options ကိုများအတွက်သိကောင်းစရာများ
ဇီဝဗေဒရှိ "အော်တို" ရှေ့စာလုံးများ၏အပြီးအစီးအဓိပ္ပာယ်နားလည်ခြင်း
Ladies ဥရောပခရီးစဉ်: အဆိုပါပါစေရဲ့ဇယား, Big Winners နှင့်သမိုင်း
တစ်သိပ္ပံမျှတသောတရားသူကြီးသွန်သင် 10 နည်းလမ်းများ
နှစ်ဦးနမူနာ T ကစာမေးပွဲနှင့်ယုံကြည်မှု Interval သည်၏သာဓက
Ping ရဲ့မူရင်းချီဆောင်ခြင်းဂေါက်သီးရိုက်ဒုတ်စတင် Multi-ပစ္စည်းချဉ်းကပ်
2015 မစ္စတာ Olympia: ရလဒ်များ
နောက်ဆုံး RITES နှင့်မည်သို့သူတို့ဟာဖျော်ဖြေတင်ဆက်နေတဲ့အကြောင်းကိုလေ့လာပါ
ESL အသံသြဇါ - စိတ်ဖိစီးမှုအမျိုးအစားများ
Single-လိင်ကျောင်းများ4ကောင်းကျိုးများ
တောင်ပိုင်းကယ်ရိုလိုင်းနားကောလိပ်များသို့ဝင်ရောက်ခြင်းများအတွက် ACT ရမှတ်
အီတလီကြိယာ conjugation: Discutere
ပတ္တမြားအတွက် string လူစားထိုး
အဆိုပါ Achaemenid ပါရှ၏ Satrapies ၏စာရင်း
လေ့လာဖို့ထိပ်တန်း 10 နေရာများအကြောင်းလေ့လာပါ